All Content Career at MNTV (1) Top News (301) अपराध (584) अष्ट्रेलिया (1,089) कार्यक्रम (11) खेलकुद (621) चन्द्र योन्जन (7) देश (3,610) प्रविधि (60) फोटो (4) बिचार (27) भिडियो (3) मनोरञ्जन (350) राजनीति (2,379) रोचक (144) विविध (457) विश्व (1,320)
अष्ट्रेलियामा वर्किङ भिसा मार्फत पीआर दिलाइदिन्छु भनी हजारौं डलर ठग्ने फरार, अनुसन्धान हुँदै
अष्ट्रेलियामा ४५७ भिसामा काम दिलाइदिने र यसैमार्फत पीआर पनि बनाइदिने भन्दै पैसा असुलेर अलपत्र पारेको भन्दै यहाँको प्रहरीले वाईएआरएस सर्भिसेजका निर्देशकको खोजी गरेको छ । हाल अष्ट्रेलियामा नरहेको बताइएका यी व्यक्ति भारतीय मूलका हुन् । अभनिस भारद्वाज नाम गरेका उनले फेसबुक पेज तथा अन्य विभिन्न सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट अष्ट्रेलियामा पीआर दिलाइदिने विज्ञापन गर्दै आएका थिए । सुरुको परामर्श निःशुल्क भन्दै विज्ञापन गरिएपनि अन्ततोगत्वा काम दिलाइदिएवापत ५० हजार डलरसम्म लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । उनले यस्तो काम दिने कम्पनीलाई कति दिन्थे र अन्य कसकसलाई रकम बुझाउँथे भन्ने नखुले पनि उनलाई ३५ हजार डलर बुझाएर भिसाको निम्ति पर्खिएको तर भिसा नआएपछि रकम फिर्ता माग्दा नदिएको भन्दै गुनासो गर्नेमध्येकै एक हुन् पाकिस्तानी नागरिक सोहईल खान । सन् २०१५ मा उनको पढाई सकिएको थियो । पढाई सकिएपछि उनी स्वदेश फर्कनुभन्दा यहाँ केही काम पाउन पाए यतै अष्ट्रेलिया बस्ने सपना देख्न थाले । उनले यसैका लागि कामको खोजी गरिदिने आश्वासन दिएको भारद्वाजको कम्पनीसँग सम्पर्क गरे । आईटी पढेका उनले त्यही कामका लागि स्पोन्सरशिप सहित दिने कम्पनी रहेको व्यहोरा गम ट्रीमा भेटे । सम्पर्क गर्दै जाँदा भारद्वाजको फन्दामा पुगेका उनलाई विभिन्न कामका अफरहरु र भिसा एप्लाई गरिएको विवरण पनि कम्पनीले पठायो । तर, उनी भिसा सकिएका कारण स्वदेश फर्कनुपर्यो । ३५ हजार डलर बुझाएर दुई वर्ष कुरिसक्दा पनि केही नआएपछि उनले आफ्नो पैसा फिर्ता मागे । तर, उनको फोन ब्लक गरियो ।
Advertisement Published in various Social sites : Source FB
अष्ट्रेलियाको एविसी टेलिभिजनका रिपोर्टर डान ओक्सले उनको नाममा भिसा आवेदन दिइएको तर त्यो किन स्वीकृत भएन भन्ने कारण भने फेला नपरेको बताएका छन् । खानलाई स्पोन्सर गर्ने कम्पनी सम्पर्क बाहिर थियो । यस्तै कथा अर्का भारतीय नागरिक विपिन शर्माको पनि छ । उनले नयाँदिल्लीमा माईग्रेसन एजेन्सी चलाएका थिए । त्यतिबेला आफ्नै नातेदार भएका कारण सम्पर्कमा आएका भारद्वाजले उनलाई अष्ट्रेलिया नै आएर काम गर्न आग्रह गरे । यसका लागि पैसा लाग्ने भन्दै उनीसँग रकम पनि लिए । तर, जब धेरै समय भयो शर्माले पैसा फिर्ता मागे । उनले जवाफ दिए, “म एक सुको पनि दिन्न, जे गर्नुछ गर ।” यी त प्रतिनिधि घटना हुन् । उनले एकजना व्यक्तिबाट ५० हजार डलरसम्म असुलेको देखिएको छ । शर्माको नाममा भिसा एप्लाई त गरिएको रहेछ तर त्यो रिजेक्ट भयो । उनको नाममा भिसा एप्लाई गरिएको कम्पनीका निर्देशकसँग बुझ्दा उसले आफ्नो कम्पनीले स्पोन्सरशिपका लागि कुनै सहमति नदिएको बताएको छ । यता भारतमा विपिन शर्मालाई पनि उनको भिसा रिजेक्ट भइसकेको छ भन्ने जानकारी दिइएको छैन । एविसी टेलिभिजनले कुरा गरेका करिब ६ जनामध्ये सबैले पैसा त बुझाए तर काम र भिसा भने पाएनन् । अष्ट्रेलियाको मेलबर्नको पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको ईन्डष्ट्रियल पार्कमा रहेको वाईएबीएसको कार्यालयमा पुग्दा त्यहाँका घरधनीले भने, कम्पनी त बन्दै भइसक्यो । भाडा पनि तिरेको छैन । उनीहरु सम्पर्क बाहिर छन् । कम्पनीको वेवसाईटमा भने कार्यालयमा अष्ट्रेलियाका विभिन्न उच्च राजनीतिक नेताहरुसँग भारद्वाजले कुम जोडेर उभिई खिचेका फोटोहरु राखिएको देख्न सकिन्छ । यस्तो फोटोहरुमा एउटा त पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी एबटको समेत छ । बोर्डर फोर्सका एक अधिकारीले यस किसिमको भ्रामक प्रचार वेवसाईटमा भइरहेको विषयमा आफुहरुलाई जानकारी भएको बताए र यसमा छानविन चलिरहेको पनि उल्लेख गरे । साथै उनले भारद्वाजको कम्पनीको सेवा लिएकाहरुलाई आफ्नो कुनै समस्या भए सम्पर्क गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
Mr. Bharadwaj with former Prime Minister Tony Abott : Source Company Website
(Visited 2,945 times, 1 visits today)
मेसी म्याजिक भएको अवस्थामा अर्जेन्टिनाका लागि दोश्रो चरणको ढोका यसरी खुल्नसक्छ
गोल किपरको मुर्खताले अर्जेन्टिना संकटमा, क्रोएसियासँग तीन शून्यले पराजित
माओको देशमा ओली, नेपाल कम्युनिष्ट आन्दोलनबाट विश्वले सिक्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई
मासुका लागि कुकुर मार्ने काम बन्द गर्न कोरियाको अदालति आदेश
नेपाल र अष्ट्रेलियाबीच व्यापार बृद्धि गर्न मेलबर्नमा ‘विजनेस फोरम’ आयोजना हुँदै
अलविदा डा. देवकोटा, गोर्खा धन्य भयो तिम्रो जन्मबाट, नेपाल धन्य भयो तिम्रो कर्मबाट !
असार १४ गते काठमाडौं ओर्लदै नयाँ विमान, थप आठ विमान किन्ने तयारी
प्रधानमन्त्री चीनतर्फ, ६ दिने भ्रमणबाट नेपालीको धेरै अपेक्षा
वरिष्ठ न्यूरो सर्जन उपेन्द्र देवकोटाको निधन, मंगलबार विहान ८ बजेदेखी १ बजेसम्म श्रद्धाञ्जली दिइने
विश्वकपको नयाँ मोड, जर्मन मेक्सिकोसँग पराजित, ब्राजिल स्वीट्जरल्याडसँग बराबरीमा